အင်​ဂျင်နီယာမ​လေး – Grab Love Story
by phyu May 3, 2021
ထွန်း​မောင်​တို့တစ်​ရုံးလုံး စိတ်​လှုပ်​ရှား​နေကြသည်​ ။ ရုံးကိုစာဝင်​ထားသည်။ အင်​ဂျင်​နီယာမမတစ်​​ယောက်​ အသစ်​ဝင်​လာမည်​တဲ့။ အင်​ဂျင်​နီယာမမမ​ရောက်​ခင်​တည်းက သူ​နေဖို့အ​ခန်း ​ရေချိုးခန်းအိမ်​သာကအစ ထွန်း​မောင်​တို့အဖွဲ့က ပြင်​ဆင်​​ပေးထားကြရသည်​။ မန်​​နေဂျာကြီးက​တော့ ဒီ​နေ့လာမယ်​လို့ထွန်း​မောင်​တို့ကို အသိ​ပေးထား​လေရဲ့။ အရင်​တည်းက အွန်လိုင်း မှာ အင်​ဂျင်​နီယာမမ​တွေရဲ့ပုံ​တွေမြင်​ဖူးထား​​တော့ ပုံထဲကလို အလှပ​ဂေးေ​လး​တစ်​​ယောက်​လာမယ်​ဆိုတာ​တော့ ထွန်း​မောင်​တို့ကြိုသိ​နေကြသည်​…….။ ​ ဟော လာပါပြီဗျာ ကား​ပေါ်မှ သူမဆင်းလာသည်​။ အရပ်​ကငါး​ပေငါး ခါး​သေးရင်​ချီက​လေး ဝတ်​ထားတဲ့ အင်​ဂျင်​နီယာအီကျီ င်္ကြပ် နဲ့ သူမအရမ်းလိုက်​ဖက်​​နေသလို အသားဖြူတာ​လေးက သူမအလှကို​ပို​ပေါ်လွင်​​စေ​အောင်​ ကူညီ​နေသလိုပင်​။ မန်​​နေဂျာကြီး ရုံးခန်းတွင်းသို့ သူမဝင်​သွားသည်​ကို ထွန်း​မောင်​တို့တစ်​စု​ငေးကြည့်​​နေကြရသည်​။ လမ်း​လျောက်​တာ​လေးက ကနွဲ့ကလျနှင့်​ ​ခြေတစ်​လှမ်းလှမ်းတိုင်း အီကျီ အကြပ်​ ကြောင့်​ ခန္ဓာကိုယ်​တင်​သားရင်​သားအလှ​တွေက လှချင်​တိုင်းလှ​နေ​တော့သည်​။ အင်​ဂျင်​နီယာမမ နာမည်​က ဆုရည်​တဲ့။ နာမည်​​လေးကလဲလှ လူကလည်းလှ ဒီလိုမိန်းက​လေးနဲ့ ဖူးစာဆုံရင်​​ကောင်းမှာပဲလို့ ထွန်း​မောင်​စိတ်​ကူးယဉ်​မိသည်။ ဒါ​ပေမယ့်​ အဆင့်​ချင်းကွာလွန်းသည်။ သူမက ကို့အထက်​လူကြီးလည်းဖြစ်​​တော့ မမှန်းရဲ​ပေ။ ဆုရည်​မှာ ချစ်​သူရှိသည်​။ သူမချစ်​သူက ရုံးအပြင်​မှာရပ်​​စောင့်​​နေတာ သူမကိုရုံးထဲထိလိုက်​ပို့​ပေးပြီး သူမရုံးထဲကပြန်​ထွက်​လာမှ အကွယ်​တစ်​​နေရာသွားပြီး နှူတ်​ဆက်​အနမ်း​ပေးပြီး သူ့ချစ်​သူပြန်​သွားသည်​။
ဆုရည်​အတွက်​ ​နေဖို့အ​ဆောင်​ကို ထွန်း​မောင်​တို့အဖွဲ့ကပဲ အထုပ်​​တွေကူထမ်း​ပေးပြီး လိုက်​ပို့ရသည်​။ သူမ​နေဖို့အခန်းထဲ ကူညီညာလုပ်​​ပေးကြရသည်​။ ဆိုဒ် က မိသားစုဝင်တစ်​ချို့ပါ လာကူညီ​ပေးကြသည်​။ သူမအ​နေနဲ့ ဆိုဒ် ထဲက လူ​တွေလာကူညီ​ပေးလို့ ဝမ်းသာ​နေပုံရသည်​။ ထွန်း​မောင်​အိမ်​မပြန်​ခင်​ သူမမျက်​နှာ​လေးကိုခိုးပြီး ကြည့်​​နေမိသည်​။ ည​ရောက်​​တော့ ထွန်း​မောင်​အိပ်​ယာထဲမှာ ဆုရည်​နာမည်​​လေးမှန်းပြီး ထုရတာ​ပေါ့။ ညတိုင်းထွန်း​မောင်​အတွက်​ အိပ်​ယာထဲက စိတ်​ကူးယဉ်​ပင်​တိုင်​ မင်းသမီးက​တော့ ဆုရည်​​ပေါ့။ ‘အား…….ဆုရယ်​အရမ်းချစ်​မိ​နေပြီကွာ’ ‘ဆုရည်​စုပ်​​ပေးတာအရမ်း​ကောင်းတယ်​ကွာ ဒစ်လေးကို လျှာ​လေးနဲ့ကစား​ပေး​နော်​……’ ထွန်း​မောင်​တစ်​​ယောက်​ စိတ်​ကူးယဉ်​ပြီး ထု​နေတုန်း ဖီးးအတက်​လွန်​ပြီး ပါးစပ်​က​ယောင်​ပြီး အသံထွက်​သွားမိသည်​။ ​’​ဟျောင့်​… မှန်းမ​နေနဲ့ အင်​ဂျင်​နီယာမမက ချစ်​သူရှိတယ်​ ပြီး​တော့ သူနဲ့ငါတို့က ရာထူးချင်းလဲ ကွာတယ်​ မဖြစ်​နိုင်​ဘူး ထွန်း​မောင်​​ရေ’ ​ဘေးခုတင်​က သူငယ်​ချင်းကအား​ပေးစကား​ပြောသွားသည်​။ ‘​တစ်​ခါ​လောက်​ဆုရည်​နဲ့လိုးခွင့်​ရရင်​​တော့ ငါ​သေ​ပျော်​ပါတယ်ကွာ…..’ ထွန်း​မောင်​စိတ်​ထဲ​ရေရွတ်​မိသည်​။ ဒီ​နေ့ရုံးတက်​​တော့ ဆုရည်​မျက်​နှာသိပ်​မ​ကောင်း​ပေ။ သူ့ရုံးခန်းထဲ ဝင်သွားစဉ်​ ထွန်း​မောင်​စားပွဲ​ခြေ​ထောက်​ကို ခလုတ်​တိုက်​သွားလိုက်​​သေးသည်​။ ‘​ဆောရီး ကိုထွန်း​မောင်​’ လို့ဆုရည်​က​ပြောသွားသည်​။ ‘ရပါတယ်​ဆုရည်​ရယ်​ ဆုရည်ကို့စားပွဲ​ခြေ​ထောက်​ကို ခလုတ်​တိုက်​ရုံတင်​မကဘူး ကို့နှလုံးသားကိုခလုတ်​တိုက်​ခဲ့တာကြာ​ပေါ့ကွယ်​’ သူမရုံးခန်းထဲသို့ ထွန်း​မောင်​ ဝင်​စာဖိုင်​သွားပို့​တော့ ဆုရည်​သူ့ချစ်​သူနဲ့ ဖုန်းဆက်​​နေသည်​။ စကားသံကမာ​နေသည်​။ သူ့ချစ်​သူနဲ့ အဆင်​မ​ပြေဘူးထင်​သည်​။ ထွန်း​မောင်​ ဖိုင်​တွဲ​လေးကို သူမစားပွဲ​ပေါ်တင်​​ပေးပြီး ပြန်ထွက်​လာသည်​။
ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​ သူ့ချစ်​သူနဲ့ အဆင်​မ​ပြေတာ ရက်​ရှည်​ဖြစ်​လာတာကို ထွန်း​မောင်​ရိပ်​မိလာသည်​။ ရုံး​ရောက်​တာနဲ့ ဆုရည်​သူ့ချစ်​သူနဲ့ ဖုန်း​ပြောရင်း ရန်​ဖြစ်နေတာပဲ ခဏခဏမြင်​​နေရသည်​။ တခါတရံ ဆုရည်​​စားပွဲ​ပေါ်​မှောက်​ရက်​​လေး ငို​နေသည်​ကို မြင်ရသည်​။ ‘ဖြစ်​ရ​လေချစ်​ရတဲ့ဆုရည်​ရယ်​ ဆုရည်​မျက်​ရည်​တစ်​​ပေါက်​ကျတိုင်း ကို့ရင်​ထဲနာကျင်​ရတာ ဆုရည်​မသိလေသလားကွာ….’ ဒီ​နေ့စ​နေ​နေ့ဆို​တော့ ရုံးပိတ်​​ပေမယ့်​ ထွန်း​မောင်​ရုံးကိစ္စ​တွေ​ရှိ​သေးလို့ ရုံးကိုလာခဲ့ရသည်​။ ဝင်​စာဖိုင်​​တွေကို စီသည်​။ ထွက်​စာဖိုင်​​တွေအတွက်​ စာစီစာရိုက်​သည်။ ထိုစဉ်​ ရုံးထဲ ဆုရည်​ဝင်​လာသည်​ကို အမှတ်​မထင်​မြင်​လိုက်​ရသည်​။ မြန်​မာဝတ်​စုံ​လေးနဲ့ ပါတိတ်​ဆင်​ပန်း​ရောင်​​လေးကို ဝမ်းဆက်​ဝတ်​ထားတဲ့သူမအလှက ထွန်း​မောင်​အတွက်​ နတ်​သမီး​လေးတစ်​ပါးအလားပင်​။ ‘ဆုရည်​ဒီ​နေ့ရုံးလာတာလား ဒီ​နေ့ပိတ်​ရက်​​လေ’ ထွန်း​မောင်​ဆီးကြိုနှုတ်​ဆက်​လိုက်​သည်​။ ‘ဟုတ်​တယ်​ ကိုထွန်း​မောင်​​ရေ ဟို​နေ့​တွေက မပြီးသေးတဲ့ အလုပ်​​တွေကိုပိတ်​ရက်​မှ အစားပြန်​လုပ်​ရတာ’ ဆုရည်​ကပြန်​​ဖြေသည်​။ ဆုရည်​သူ့ရုံးခန်းထဲ ဝင်​သွားသည်​။ ထွန်း​မောင်​စာစီစာရိုက်​ ဆက်​လုပ်​​နေ​သော်​လည်း စိတ်​​တွေက ရုံးခန်းထဲဝင်​သွားဖို့ပဲ တိုက်​တွန်းနေသည်​။ တစ်​ရုံးလုံးမှာ သူနဲ့ဆုရည်​နှစ်​​ယောက်​တည်းရှိသည်​။ စိတ်​ရှိလက်​ရှိကို ကြိုက်​သလိုဝင်​လုပ်​လို့ရတဲ့ အ​နေအထား။ ထွန်း​မောင်​စိတ်​ထဲ လွန်​ဆွဲ​နေသည်​။​ နောက်​ဆုံး​တော့ သူမရုံးခန်းထဲမဝင်​ဖြစ်​ပဲ တံခါးဝမှ​နောက်​ပြန်​အလှည့်​မှာ အခန်းထဲက ခွမ်း ဆိုတဲ့အသံ​ကြောင့်​ ထွန်း​မောင်​ကပျာကယာ သူမရုံးခန်းထဲ​ပြေးဝင်​သွားလိုက်​သည်​။’
ဆုရည်​ဘာဖြစ်​လို့လဲ ကျွန်​​တော်​ဘာကူညီ​ပေးရမလဲ’ ‘​ကော်​ဖီခွက်​ကျကွဲသွားတာ ကိုထွန်း​မောင်​​ရေ ခုတလော စိတ်​နဲ့ လူနဲ့သိပ်​မကပ်​ဘူးဖြစ်​​နေတယ်​ အလုပ်​လုပ်​ရင်း​ ခေါင်းကြည်​​အောင်​​ ကော်​ဖ်ီဝယ်​လာတာ ခုကျကွဲသွားပြီး ​ကော်​ဖီ​တွေပါကုန်​ပြီ’ ‘ကျ​နော်​ကြမ်းပြင်​မှာ​ပေကုန်​တာ​တွေ ကူရှင်း​ပေးမယ်​ ပြီးရင်​​ ကော်​ဖီအသစ်​ဝယ်​​ပေးပါ့မယ်​’ ‘​ကျေးဇူးပဲ ကိုထွန်း​မောင်​သာရုံးမှာမရှိရင်​ ကျွန်​မတစ်​​ယောက်​တည်း ရွာပျက်​​နေမှာ’ ထွန်း​မောင်​ကြမ်းပြင်​​ပေါ်မှ​ကော်​ဖီ​တွေနှင့်​ ဖန်​ကွဲစ​တွေကို ကူရှင်း​ပေးလိုက်​သည်​။ ‘ကိုထွန်း​မောင်​ ပိုက်​ဆံယူသွားလိုက်​ ​ကော်​ဖီ​ဖိုး​ရော ဖန်​ခွက်​ဖိုးအတွက်​​ပေါ့’ ‘ရပါတယ်​ ဆုရည်​ရယ်​ ဖန်​ခွက်​​တွေရုံးမှာရှိပါ​သေးတယ်​ ​ကော်​ဖီကျွန်​​တော်​စိုက်​ဝယ်​ခဲ့မယ်​ ပြန်​​ရောက်​မှပြန်​​ပေးပါ’ ထွန်း​မောင်​သူမအတွက်​ မြို့မှာအ​ကောင်းဆုံး​ကော်​ဖီဆိုင်​က​ကော်​ဖီသွားဝယ်​သည်​။ ပြန်​လာ​တော့ လမ်းမှာဆိုင်​ကယ်​စီးလာရင်း စဉ်းစားမိသည်​။​ ‘​ရေ​ဆေးငါးကြီး ငါ့လက်ထဲ​ရောက်​​နေပြီပဲ ငါလုပ်​သင့်​တာလုပ်​ရ​တော့မယ်​’ ဒီတစ်​ခါ​တော့ စိတ်​ရိုင်းက အနိုင်​ယူသွားသည်​။ အပြန်​လမ်းမှာ ​ဆေးဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​ဝင်​ပြီး အိပ်​​ဆေးတစ်​ကတ်​ဝယ်​လာလိုက်​သည်​။ ရုံးပြန်​​ရောက်​​တော့ ဆုရည်​အတွက်​​ကော်​ဖီကို ခွက်​ထဲထည့်​​နေရင်း အိပ်​​ဆေး​ကို အမှုန့်​ကြိတ်​ပြီးထည့်​​ပေးလိုက်​သည်​။ ‘​ကော်​ဖီရပါပြီ ဒီမြို့မှာအ​ကောင်းဆုံး​ကော်​ဖီပါဗျား’ ‘​ကျေးဇူးပါကိုထွန်း​မောင်​​ရေ ဆုရည်​က ဒီမြို့မှာတာဝန်​ကျတာမကြာ​သေး​တော့ ဘယ်​ဆိုင်​​ကောင်းတယ်​ဆိုတာ မသိ​သေးဘူး ကိုထွန်း​မောင်​​ကျေးဇူး​တွေ များလှပါပြီ’ ‘ရပါတယ်​ဗျာ…’ ထွန်း​မောင်​စိတ်​ထဲကျိတ်​ပြုံးထားလိုက်​သည်​။ထွန်း​မောင်​ရုံးခန်းအပြင်​ထွက်​ပြီး အလုပ်​ဆက်​လုပ်​​နေလိုက်​သည်​။ ၁၅မိနစ်​​လောက်​ကြာ​တော့ ထွန်း​မောင်​ရုံးခန်းထဲဝင်​ကြည့်​လိုက်​သည်​။ ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​စားပွဲ​ပေါ်မှာ​မှောက်​ရက်​သား​လေး အိပ်​​ပျော်​​နေ​လေပြီ။
ဆုရည်​၏ကိုယ်​တွင်း အလှ​တွေကလှချင်းတိုင်းလှ​နေကြသည်​။ ထွန်း​မောင်​ရင်​ထဲဗ​လောင်​ဆူလှပြီ။ ‘အရမ်းလှတယ်​ချစ်​ရတဲ့ဆုရည်​ရယ်​’ ထွန်း​မောင်​ ဆုရည်​ကိုချီပြီးစားပွဲ​ပေါ်ပက်​လက်​တင်​ထားလိုက်​သည်​။ ဆုရည်​ရဲ့နှူတ်​ခမ်းသား​လေး​တွေကို စုပ်​နမ်းလိုက်​သည်​။ ဆုရည်​က​တော့ အိပ်​​ပျော်​​နေဆဲ။ ဆုရည်​ရဲ့ပါးစပ်​ထဲသို့လျှာထိုးပြီး ကလိလိုက်​သည်​။ လက်​တစ်​ဖက်​က ဆုရည်​ရဲ့နို့အုံ​လေးကို ဖျစ်​ညှစ်​​နေသည်​။ ဆုရည်​ရဲ့အဝတ်​အစား​တွေ အကုန်​​ချွတ်​ပစ်လိုက်​​တော့ အဝတ်​အစားမဲ့ ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​စားပွဲ​ပေါ်ပက်​လက်​က​လေး လှချင်​တိုင်းလှ​နေလေသည်​။ ထွန်း​မောင်​ဆုရည်​ရဲ့နို့သီး​ခေါင်း​လေး​တွေကိုစုပ်​ပြီး နို့သီး​ခေါင်း​လေး​တွေကို လျှာထိပ်​​လေးနဲ့ကစား​ပေး​တော့ ဆုရည်​ထံမှ ငြီးသံ​လေးထွက်​လာသည်​။ လက်​တစ်​ဖက်​က ဆုရည်​ရဲ့​စောက်​ဖုတ်​အဝ​လေးကို ကလိပေး​နေ​လေသည်​။ ထွန်း​မောင်​တစ်​​ယောက်​ ကာမစိတ်​​တွေ ထိန်းမနိုင်​​တော့​ပေ။ လီးကို ဆုရည်​လက်​ထဲဆုပ်​ကိုင်​​စေပြီး ဂွင်းထု​လိုက်​သည်​။ ခုနစ်​လက်​မနီးပါးရှိ​သောလီးကြီးက အသင့်​အ​နေအထားထိ​ရောက်​ရှိလာ​လေသည်​။ ဆုရည်​ကိုပက်​လက်​အ​နေအထားထားပြီး ​စောက်​ဖုတ်​ဝမှာ လီး​တေ့ပြီးပွတ်​ဆွဲလိုက်​​တော့ ဆုရည်​ခါး​လေး​ကော့တက်​လာသည်​။ ထွန်း​မောင်​ စိတ်​မထိန်းနိုင်​ပဲ ​ဆုရည်​​စောက်​ဖုတ်​ထဲလီးကို​ ဆောင့်​သွင်းလိုက်​သည်​။ ‘အား….’ ဆုရည်​မချိမဆန့်​ သဲ့သဲ့​လေးငြီးသည်​။ အသွင်းအထုတ်​​လေးဆယ်​​လောက်​လုပ်​လိုက်​ပြီး ထွန်း​မောင်​ ဆုရည်​ကို စားပွဲ​ပေါ်​မှောက်​ခုံအ​နေအထား​ပြောင်းပြီး ထပ်လိုးသည်​။ ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​ အသိစိတ်​ဝင်​တစ်​ဝက်​မဝင်​တစ်​ဝက်​ဖြင့်​ ကာမ​ရေယာဉ်​​ကြောထဲစီးဝင်​​နေသည်​။ ဆုရည်​နှစ်​ခါ​တောင် ပြီးသွား​သော်​လည်း သုက်​ထိန်း​ကောင်း​သော ထွန်း​မောင်​မပြီး​သေးပဲ စိတ်​ကြိုက်​ပုံစံများ​ပြောင်းပြီးလိုး​နေ​လေသည်​။
‘အား ​ကောင်းလိုက်​တာဆုရယ်​….’ ‘အား ​ကောင်းလိုက်​တာ နာနာ​လေး​ဆောင့်​​ပေးပါ…’ ဆုရည်​​သွေးသားဆန္ဒကိုမလွန်​ဆန်​နိုင်​​တော့ပဲ​ တောင်းဆိုမိသွားသည်​။ ‘ဖတ်​ ဖ​တ်​ ဖတ်​ ဖတ်​’ စားပွဲ​ပေါ်တွင်​ဆုရည်​​စောက်ရည်​များနှင့်​စိုရွှဲ​နေ​လေပြီ။ ‘အား ဆုရည်​ ကိုပြီး​တော့မယ်​…..’ ‘ဆုရည်​လည်းပြီး​တော့မယ်​ အားကုန်​လိုး​ပေးပါတော့……’ အချက်​နှစ်​ဆယ်​ခန့်​​ဆောင့်​ပြီး ထွန်း​မောင်​တစ်​​ယောက်​ ဆုရည်​​စောက်​ဖုတ်​ထဲ သုက်​ရည်​များပန်းထည့်​လိုက်သည်​။ ထွန်း​မောင်​ အဝတ်​အစား​တွေပြန်​ဝတ်​ပြီး ဆုရည်​ကို အဝတ်​အစားပြန်​ဝတ်​မ​ပေးခင်​ အဝတ်အစားမဲ့​နေ​သော ဆုရည်​ကို ဓာတ်​ပုံရိုက်​​သည်​။ ပြီးမှ ဆုရည်​ကိုအဝတ်​အစားပြန်​ဝတ်​​ပေးပြီး ထွန်း​မောင်​ရုံးဆင်းလာခဲ့လိုက်​သည်​။ တနင်္ဂ​နွေ​နေ့လည်​ ထွန်း​မောင်​တစ်​​ယောက်​သွား​နေကျ ဘုံဆိုင်​ပဲ​ခြေဦးမလှည့်​ပဲ ဆုရည်​ရှိရာလိုင်းခန်းကို​ခြေဦးလှည့်​လိုက်​သည်​။ အခန်းတံခါး​ခေါက်​​တော့ ဆုရည်​တံခါးလာဖွင့်​သည်​။ ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​ မနေ့မနက်​က အဖြစ်​အပျက်​ကို မသိရှာ​သေးမှန်း ထွန်းမောင်​သိလိုက်​သည်​။ ‘ဟယ်​ ကိုထွန်း​မောင်​ပါလား ဘာကိစ္စလဲ မ​နေ့က​ကော်​ဖီဖိုးလာ​တောင်းတာလား’ ဆုရည်​ကအရွှန်း​ဖောက်​ပြီး​မေးသည်​။ ‘ကျွန်​​တော်​ဆုရည်​နဲ့​ဆွေး​နွေးစရာရှိတယ်​…. အထဲဝင်​ပြီး​ ဆွေး​နွေးလို့ရမလား ဆုရည်​….’ ‘ဝင်​ခဲ့ပါကိုထွန်း​မောင်​ရယ်​ ဆုရည်​အ​ပေါ်ကိုထွန်း​မောင်​​ကျေးဇူး​တွေရှိပါတယ်​…..’ အခန်းထဲ​ရောက်​​တော့ ထွန်း​မောင်​ဖုန်းထုတ်​ပြီး မ​နေ့က ရိုက်​ထားတဲ့ပုံ​တွေ ဆုရည်​ကိုပြလိုက်​တယ်​။ ‘ကိုထွန်း​မောင်​ ရှင်​ဒါဘာသ​ဘောလဲ ကျွန်မကို မ​နေ့က​ကော်​ဖီ​တိုက်​ပြီး မ​တော်​မတရားကျင့်​ခဲ့တာပေါ့…’ ဆုရည်​က တုန်​ယင်​​သောအသံဖြင့်​ထွန်း​မောင်​ကိုရန်​​တွေ့​လေ​တော့သည်​။ ‘အဲ​လောက်​ကြီး​ဒေါသမထွက်​ပါနဲ့ ဆုရည်​ရယ်​ ကျွန်​​တော်​ဒီပုံ​တွေကို ဆိုရှယ် ပေါ်မတင်​​စေချင်​ရင်​ ကျွန်​​တော်​ခိုင်းတာသာလုပ်​​ပေးပါ….’ ‘ရှင်​ဘာလိုချင်​တာလဲ ​ပြော..’ ထွန်း​မောင်​ဆုရည်​ရှိရာသို့​ လျောက်​သွားလိုက်​သည်​။
ဆုရည်​မျက်​နှာ​ရှေ့ရပ်​လိုက်​ပြီး ​ပုဆိုးချွတ်​ချလိုက်​သည်​။ ခုနစ်​လက်​မခန့်​ရှိ​သောလီးကြီးက ဆုရည်​မျက်​နှာ​ရှေ့မှာ​ငေါက်​ခနဲ။ ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​ ထွန်း​မောင်​လီးကြီးကို ကြည့်​ပြီးအံ့သြသွားရသည်​။ ‘စုပ်​​ပါ ဆုရည်​….’ ‘ဆုရည်​ကကျွန်​​တော့်​ရဲ့လိင်​ကျွန်​ဖြစ်​​နေပြီ ကျွန်​​တော်​ ခိုင်းတာလုပ်​ပါ….’ ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​မငြင်းသာ​တော့ပဲ ထွန်း​မောင်​လီးကိုစုပ်​​ပေးရ​တော့သည်​။ ‘ဂွင်းတိုက်​သလို​လေး​ရှေ့​နောက်​ဆွဲ​ပေးပါဆုရည်​ရယ်​…’ ‘ကိုကို့စိတ်​ကြိုက်​စုပ်​​ပေးပါ့မယ်​’ အခါငါးဆယ်​ခန့်​ အသွင်းအထုတ်​စုပ်​​ပေးပြီး​သောအခါ ထွန်း​မောင်​စိတ်​​တွေ ထန်​လာပြီး ဆုရည်​​​ခေါင်းကို ကိုင်​တာ ဆုရည်​ပါးစပ်​ကိုလိုး​လေ​တော့သည်​။ ‘အု ဝု အု ဖရူး…..’ ဆုရည်​မရုန်းနိုင်​ပဲ ထွန်း​မောင်​လုပ်​သမျှ ငြိမ်​ခံ​နေရတော့သည်​။ ထွန်း​မောင်​​​ဆောင့်​ချက်​တစ်​ချက်​​ဆောင့်​တိုင်း ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​ အသက်​ရှူ​တွေမှား​နေ​တော့သည်​။ အချက်​တစ်​ရာနီးပါး​ ဆောင့်​ပီးသွား​သောအခါ ထွန်း​မောင်​​ပေါင်​​တွေတုန်​ပြီး သုက်​ရည်​များဆုရည်​ပါးစပ်​ထဲပန်းထဲလိုက်​​လေ​​တော့သည်​။ ‘ဆုရည်​ သုက်​​တွေမျိုချလိုက်​​နော်​…..’ ‘ဟုတ်​ ကိုကို’ တစ်​စက်​မကျန်​မျိုချရုံမက ထွန်း​မောင်​လီးမှာ​ပေ​နေသည့်​သုက်​များကိုပါလျက်​​ပေးလိုက်​သည်​။ ဆုရည်​တစ်​​ယောက်​ ​နောက်​​နေ့များတွင် ကာမ​ရေယာဉ်​​ကြောတွင်​ အရသာကိုသိလာ​လေပြီ။ ထွန်း​မောင်​​ တောင်းဆိုစရာပင်​ မလို​တော့ပဲ အပြင်​​ဟော်​တည်တွေမှာပါ ချိန်းလိုးဖြစ်​ကြသည်​။ ​ခြောက်​လခန့်​ကြာ​တော့ ဆုရည်​တာဝန်​ချိန်​ပြီးလို့ သူ့မြို့သူပြန်​သွားရသည်​။ မသွားခင်​ညမှာ ထွန်း​မောင်ကို​ နောက်​​ပေါက်​ပါ​ပေးသွားသည်​။ ထွန်း​မောင်​တစ်​​ယောက်​ ဆုရည်​ကိုလွမ်းဆွတ်​ရင်းကျန်​ခဲ့ရသည်​။ ဆုရည်​သူ့မြို့သူပြန်​​ရောက်​ပြီးမကြာခင်​မှာ သူ့ချစ်​သူ​ကောင်​​လေးနဲ့ လက်​ထပ်​သွားသည်​။ ဖိတ်​စာ​ရောက်​လာ​သော်​လည်း ထွန်း​မောင်​မသွားဖြစ်​ခဲ့​ပေ။ ​နောက်​တစ်​ပတ်​​နေ​တော့ ထွန်း​မောင်​တို့ ဆိုဒ် ထဲကို အင်​ဂျင်နီယာမ​လေး အသစ်​တစ်​​ယောက်​တာဝန်​ကျလာသည်​။ နာမည်​​လေးက သဲနု​ဝေတဲ့….. ‘အင်း ငါ့လုပ်​ငန်းတစ်​က​နေစရဦးမှာပါလား​နော်​……’ ထွန်း​မောင်တစ်​​ယောက်​စိတ်​ထဲ​တွေးပြီး​ပျော်​​နေရပြန်​ပါပြီ……. ပြီးပါပြီ။